Fanaan Gaashaanle boolis ah oo ku nool Hargeysa - Radio Ergo
Fanaan Gaashaanle boolis ah oo ku nool Hargeysa
in Falanqeynta heesaha, Madaddaallada Ergo
Photo | Sawir/fanaan Uur-cadde/Ilyas/Ergo
Xasan Ismaaciil Uur-cade oo dad badan u yaqaannaan (Tuse Tilmaame Aw-toosiye), dugsiga hoose dhexe markii uu ahaa fasalka afraad sanadihii 1962-kii ayuu ardayda uga qaadi jiray qasiidooyinka si uu fanaan u noqdo.
Sanadkii 1968-kii ayuu Uur-cade qaaday heestiisii ugu horreysay ee ‘Heelo’. Riwaayadda caan ka noqotay ee If iyo Aakhiro, ayuu sidoo kale ka ahaa Aktar ama jilaaga koowaad, iyadoo mataaladda booskaas ay ku wehlisay fanaanada Sahra Axmed, sanadkii 1970-kii.
Xasan oo imika ah gaashaanle ka tirsan ciidamada Booliiska Somaliland horena u ahaa fanaan caan ka ahaa deegaanada Soomaalida, waxaa wareysi magaalada Hargeysa kula yeeshay Ilyaas Cabdi Cali oo ka wareystay wixi ay ku qaadatay inuu fanaan noqdo.
Dhegeyso xubinta qiimaha xoolaha
Xoolo-dhaqato ay saameynta abaarta u beddeshay beero-falato
Sanaag: Meherad qofka sheekeeya uu dadka oo dhan Shaaha u shubo
Dhegeyso qaar ka mid ah heeso carruureedka
Kaalinti uu fanka kulaa ololihii waxbarashada far-Soomaaliga
Halkan ka dhegeyso sheekada Lama Huraan
Waxaa la i yaqaanaa ninki idaacadaha dhegeysan jiray
Gurceel: Tuulooyinka qaar in geed la fuulo mooyee teleefoon laguma hadli karo